कोरोना कहरले स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि « Jagaran News
कोरोना कहरले स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि
Published On : 15 September, 2021 7:37 am
काठमाडौँ, भदौ ३० । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा बुधबारदेखि सुरु गर्दैछ । कोरोना कहारका कारण यसअघि स्थगित परीक्षा आजबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
परीक्षा असोज ८ गतेसम्म चल्ने छ । बोर्डका (कक्षा ११ र १२ हेर्ने) परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले अधिकांश विद्यार्थीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेका र सङ्क्रमण पनि बिस्तारै नियन्त्रण हुने अनुमान गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
परीक्षाका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिएको जनाइएको छ । यसअघि साउन ३१ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएकोमा बोर्डले अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेको थियो ।
यस पटक ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने जनाइएको छ । परीक्षामा विद्यार्थीलाई होम सेन्टर ९विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालयमा परीक्षा दिने०को व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यार्थीलाई अरू विद्यालयमा परीक्षा दिन जानका लागि असुविधा हुन सक्ने भएकाले होम सेन्टरको सुविधा दिइएको हो । परीक्षामा यस पटक ४ हजार ३१५ वटा परीक्षा केन्द्र तय गरिएको छ ।
प्रत्येक विद्यार्थीले आ–आफ्नै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा। चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो । परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका विद्यार्थीहरूलाई पछि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्यार्थीले आफू सङ्क्रमित भएको प्रमाणसहित परीक्षामा सामेल हुन नपाएको जानकारी गराउने विद्यार्थीलाई पछि पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
परीक्षाका लागि तयार पारिएका प्रश्नपत्र बुधवार बिहान साढे १० बजेसम्ममा अनलाइन माध्यमबाट हरेक परीक्षा केन्द्रमा पुर्‍याइने परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा। पौडेलले बताए ।
यसैबीच बोर्डले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी कक्षा १२ का विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरिने जनाएको छ ।
देशभर मौसम बदली, धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित बर्षाको सम्भावना
काठमाडौं, ३० भदौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज दिनभर मौसममा बदलीको अवस्था रहेको मौसमविदले जनाएका छन्
काठमाडौं, भदौं ३०। धानमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेलामा मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ ।
८५ सहसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, भदौं २९ । सरकारले ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा
थप १, ५६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १९ को मृत्यु, निको कति भए ?
काठमाडौं, भदौ २९ । बितेको २४ घण्टामा देशभर १ हजार ५६२ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ, भदौ ३० । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा बुधबारदेखि सुरु गर्दैछ